Paul Scholes oo saddex ka mid ah xiddigaha Man United ku eedeeyay natiijooyinka niyadjabka leh ee kooxda – Gool FM
Paul Scholes oo saddex ka mid ah xiddigaha Man United ku eedeeyay natiijooyinka niyadjabka leh ee kooxda
Dajiye September 5, 2019
(Manchester) 05 Sebt 2019. Halyeeyga kooxda Manchester United ee Paul Scholes ayaa doortay seddex ciyaaryahan oo ay ku eedeeyn karaan natiijooyinka niyad jabka leh ay kooxda la kulantay xili ciyaareedkan, iyadoo kooxda ay saddexdii kulan ugu dmbeeyay aysan wax guul ah gaarin.
Kooxda Man United ayaa ku bilaabatay si niyad jab leh kulamada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, inkastoo guul muhiim ah ay ka gaareen Chelsea kulankii furitaanka horyaalka ee xili ciyaareedka cusub 2019/2020.
Haddana United-ka ayaa waxay barbaro la soo gashay Wolverhampton, kahor inta aysan guuldaro kala kulmin kulankii Crystal Palace ay kula ciyaartay garoonka Old Traffor, halka kulankoodii ugu dambeeyay ay ka ciyaareen horyaalka ay barbaro la galeen kooxda Southampton.
Si kastaba ha noqotee, Paul Scholes ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku weeraray saddex ka mid ah xiddigaha kooxda Manchester United wuxuuna yiri:
“kama careysani xiddigaha da’ayrta ah, laakiin waxaan ka careysanahay xiddigaha khibrada leh, Markuu Matic si joogto ah kubadda u luminayo, sidoo kale Ashley Young iyo Paul Pogba oo aan ogeyn inta jeer ee uu kubadda qasaariyeen, taasina waa arrin niyadjab ah”.
“Waxaa jira ciyaartoy adiga kula mid ah tusaale ahaan, waxaan u maleynayaa inay goobjoogayaashu ka saaraan United-ka hanashada tartamada kala duwan mudadda labada sano ee soo socota, sidaas darteed waa in Ole Gunnar Solskjær uu cadeyn karaa waxa uu doonayo inuu sameeyo afarta ama shan suuq kala iibsi ee soo socota”.
“United waxay u socotaa inay ka gadaal marto kooxaha Manchester City, Liverpool, Chelsea iyo Tottenham”.
“Waxaan u maleynayaa in United-ka ay tahay daqiiqadaha ay ciyaarayaan xiddigaha da’ayrta ah inay dul qaataan, laakiin ciyaartooyda qibrada leh waa inay talaabo qaadaan”.
“Messi ma ahan bini’aadam caadi ah... I rumaysta!” – Xiddig hore ee kooxda Barcelona ah
Juventus oo qorsheeneysa inay la soo saxiixato saddex ka mid ah xiddigaha kooxda Man United